လိုအပျနသေူမြားအတှကျ စားခငျြသလောကျ စားပွီး ပေးခငျြသလော ကျပေးလို့ရတဲ့ သားသတျလှတျ ထမငျးဆိုငျလေး စပျတူ ဖှငျ့လှဈလိုကျတဲ့ မပေနျးခြီ – Shwe Likes
Shwe | May 19, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရိတျသတျကွီးရေ သိပျကို ခဈြစရာေ ကာငျးတဲ့ မပေနျးခြီဆိုတဲ့ မငျးသမီး သရုပျဆောငျ ကိုသိကွမယျလို့ထငျပါတယျ။ အရငျက ဇာတျလ မျးတှေ ကွျောငွာတှမှော ပါဝငျသရုပျေ ဆာငျခဲ့ပမေယျ့ အခုလို အနုပညာလုပျငနျးတှေ သိပျမလုပျဖွ ဈကွတော့တဲ့အ ခြိနျမှာ Live Sale လေးေ တှလုပျရငျး စီး ပှားရှာနသေူေ လးပါနျော…
အခုေ နာကျပို ငျးဆိုရငျ စိနျဆိုငျ ရှဆေိုငျတှနေဲ့ အင်ျကြီဆိုငျေ တှက သူ့ကို Live လှငျ့ဖို့ လာငှားကွပွီး သူကလညျး သူလကျခံ ထားတဲ့ အလုပျတိုငျး ကို စိတျပါပါနဲ့ လုပျကိုငျပေးသူတ ဈဦးလညျးဖွဈပါ တယျနျော…
မိသားစုကို လုပျကြှေးပွု စုနသေူပီပီ သမာအာဇီ ဝနဲ့ အလုပျကွိုးစားေ နသူလေးဖွဈသလို မိသားစုတငျမကပဲ အားနညျးနတေဲ့သူ ခှနျအားနညျးတဲ့သူ ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ သူတှကေိုပါ ကူညီပေးတတျသူလေးပါ။
အခုဆိုရငျ လညျးသူနဲ့ မိုးမာနျ ဆိုသူ အဈကိုတဈယောကျ နဲ့ စုပေါငျးရငျးနှီးပွီွးကိုကျသလောကျစား ပေးခငျြသလော ကျပေးလို့ရတဲ့ သားသတျ လှတျထမငျး ဆိုငျလေးကို ဖှငျ့လှဈထားတယျ လို့သိရပါတယျ…
” ကြှနျတျော ရယျ ကြှနျတေျာ့ညီမမေ ပနျးခြီရယျ ဖှငျ့လှဈပွီး ကြှနျတျောတို့မွနျမာ့စိတျရငျးပရဟိတ အဖှဲ့ဝငျမြားဝနျးရံသော စားခငျြသေ လာကျစား ပေးခငျြသလောကျပေး သားသတျလှတျ ထမငျး ဆိုငျမှ ရရှိသော ဟငျးလြာမြားပါခငျဗြ
ဆိုငျတညျနရော တောငျဒဂုံ ၅၆ရပျကှကိ ပုဂံလမျးမကွီးပျေါ ဝနဝါသီဘုနျးကွီးကြောငျးရှေ့ ၇ ရကျသားသမီး စားသုံးနိုငျအောငျ share ပေးကွပါအုနျး” လို့ ရေးသား ထားခဲ့ပါတယျ။
အခုလို တဈနတေ့ာ ဝမျးစာအတှကျ ခကျခဲနကွေတဲ့သူေ တှမြားတဲ့ အခြိနျမှာ ဒီလို ဆိုငျလေးဖှငျ့ေ ပးထားတာက အရမျးကို ကုသိုလျရသလို ပီတီဖွဈစရာပါပဲနျော…. သူတို့ဆိုငျလေးရောငျးကောငျးပါစေ… ခုနှဈရကျသားသမီးလညျး ဝမျးဝပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော… Credit;
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သိပ်ကို ချစ်စရာေ ကာင်းတဲ့ မေပန်းချီဆိုတဲ့ မင်းသမီး သရုပ်ဆောင် ကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အရင်က ဇာတ်လ မ်းတွေ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ေ ဆာင်ခဲ့ပေမယ့် အခုလို အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ သိပ်မလုပ်ဖြ စ်ကြတော့တဲ့အ ချိန်မှာ Live Sale လေးေ တွလုပ်ရင်း စီး ပွားရှာနေသူေ လးပါနော်…
အခုေ နာက်ပို င်းဆိုရင် စိန်ဆိုင် ရွှေဆိုင်တွေနဲ့ အင်္ကျီဆိုင်ေ တွက သူ့ကို Live လွှင့်ဖို့ လာငှားကြပြီး သူကလည်း သူလက်ခံ ထားတဲ့ အလုပ်တိုင်း ကို စိတ်ပါပါနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးသူတ စ်ဦးလည်းဖြစ်ပါ တယ်နော်…
မိသားစုကို လုပ်ကျွေးပြု စုနေသူပီပီ သမာအာဇီ ဝနဲ့ အလုပ်ကြိုးစားေ နသူလေးဖြစ်သလို မိသားစုတင်မကပဲ အားနည်းနေတဲ့သူ ခွန်အားနည်းတဲ့သူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ သူတွေကိုပါ ကူညီပေးတတ်သူလေးပါ။
အခုဆိုရင် လည်းသူနဲ့ မိုးမာန် ဆိုသူ အစ်ကိုတစ်ယောက် နဲ့ စုပေါင်းရင်းနှီးပြီးြ ကိုက်သလောက်စား ပေးချင်သလော က်ပေးလို့ရတဲ့ သားသတ် လွတ်ထမင်း ဆိုင်လေးကို ဖွင့်လှစ်ထားတယ် လို့သိရပါတယ်…
” ကျွန်တော် ရယ် ကျွန်တော့်ညီမမေ ပန်းချီရယ် ဖွင့်လှစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့စိတ်ရင်းပရဟိတ အဖွဲ့ဝင်များဝန်းရံသော စားချင်သေ လာက်စား ပေးချင်သလောက်ပေး သားသတ်လွတ် ထမင်း ဆိုင်မှ ရရှိသော ဟင်းလျာများပါခင်ဗျ
ဆိုင်တည်နေရာ တောင်ဒဂုံ ၅၆ရပ်ကွကိ ပုဂံလမ်းမကြီးပေါ် ဝနဝါသီဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ ၇ ရက်သားသမီး စားသုံးနိုင်အောင် share ပေးကြပါအုန်း” လို့ ရေးသား ထားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို တစ်နေ့တာ ဝမ်းစာအတွက် ခက်ခဲနေကြတဲ့သူေ တွများတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို ဆိုင်လေးဖွင့်ေ ပးထားတာက အရမ်းကို ကုသိုလ်ရသလို ပီတီဖြစ်စရာပါပဲနော်…. သူတို့ဆိုင်လေးရောင်းကောင်းပါစေ… ခုနှစ်ရက်သားသမီးလည်း ဝမ်းဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်… Credit;
မှေးနလေ့ကျဆောငျမရလို့ စိတျကောကျနတေဲ့ ခေးဆကျသှငျ ကို အံသွမှငျသကျသှားအောငျ စပရိုကျ အကွီးကွီးတိုကျလိုကျတဲ့ စိုပွမွေငျ့